Yako Webhusaiti Inotaura SaAmazon?
NeChishanu, Kurume 10, 2017 Muvhuro, March 13, 2017 Muhammad Yasin
Amazon yakapedzisira kubvunza riini iwe kuti ndiwe ani? Pamwe pawakatanga kusaina yako account yeAmazon, handiti? Yakareba zvakadii izvozvo? Ndizvo zvandakafunga!
Ukangopinda muakaunti yako yeAmazon (kana kungoshanyira yavo saiti kana iwe watopinda), inokukwazisa iko kurudyi-kona. Kwete maAmazon anokukwazisa chete, asi anokurumidza kuratidza zvinhu zvinoenderana: zvigadzirwa mazano zvichibva pane zvaunofarira, kubhurawuza nhoroondo, uye kunyangwe chako chinyorwa chinyorwa. Pane chikonzero nei Amazon iri eCommerce simba. Iyo inotaura kwauri kunge munhu, uye KWETE kunge webhusaiti ... uye chiri chimwe chinhu mhando zhinji dzinofanirwa kunge dzichisanganisa kune avo mawebhusaiti.
Kana ukasacherekedza, mazhinji mawebhusaiti ane ndangariro pfupi-pfupi. Hazvina mhosva kuti iwe unoshanyira kangani webhusaiti, unogona kuzviwana iwe uchiisa ruzivo rwako kakawanda. Kunyangwe iwe ukaburitsa eGuide kubva kusangano (mushure mekuzadza ruzivo rwako), uye ukawana email inokukoka kuti utore eGuide inotevera, pamwe uri kuzviwana uchifanira kuzadza ruzivo rwako zvakare. Zvakango… zvinonetsa. Izvo zvakafanana nekukumbira shamwari yako nyasha wobva wati kwavari "ndimi aniko zvakare?" Vashanyi vewebhusaiti zviri pachena havatukwi nenzira chaiyo - asi vazhinji vanogumbuka.
Kufanana nevazhinji vanhu, ini ndakanyatsonaka pakurangarira zviso, asi zvinotyisa pakurangarira mazita - saka ndinoita nhamburiko yakabatana yekuvarangarira nezveramangwana. Kana ndaona kuti ndakanganwa zita ravo, ndinonyora pasi mufoni mangu. Iniwo ndinoita zvangu zvandinogona kunyora pasi ruzivo rwekuwedzera mune vandinoshamwaridzana navo senge chikafu chandinofarira, mazuva ekuzvarwa, mazita emwana, nezvimwe - chero chinhu chakakosha kwavari. Izvo zvinonditadzisa kubva pakuvabvunza ndichidzokorora (izvo zvisina hunhu) uye pakupedzisira, vanhu vanokoshesa kuedza. Kana chimwe chinhu chichireva kune mumwe munhu, ini ndoda kuve nechokwadi chekurangarira icho. Mawebhusaiti ako anofanira kuita zvakafanana.
Zvino, ngative vakatendeseka pachedu - kunyangwe ukanyora zvese pasi, hausi kuzoyeuka zvese zvakakosha. Nekudaro, iwe unomira wakakura mukana wekurangarira zvimwe zvakawanda kana iwe ukaedza. Mawebhusaiti anofanirwa kuita zvakafanana - kunyanya kana vachida kuita zvirinani nevatengi, vawane kuvimba kwavo uye vaone zvimwe zviitiko.
Kunyangwe vari iwo muenzaniso uri pachena, Amazon haisiriyo yega webhusaiti iyo iri kumberi-kufunga nehana. Kune akawanda emasangano akasarudza kuti zvakakosha sei kuita gadzira zviitiko zvavo zvepamhepo izvo zvinonyanya kubata uye kufunga. Heano mashoma andinogona kubvarura kure nyore nyore:
Pano paPerQ, takatanga kushandisa BvunzaNicely - chirongwa chinounganidza mhinduro dzinoitika kuburikidza ne Net Promoter Score kuburikidza ne-e-mail. Nezvinangwa zvedu, isu tinoda kuwana kunzwisiswa kuri nani kweizvo vatengi vanofunga chokwadi nezve chigadzirwa chedu. Chinyorwa chakareruka chechipiri-chikamu chinotumirwa kune wega wevatengi vedu. Chikamu chekutanga chinokumbira mutengi kuyera mukana wavo wekutitumira pachikero kubva pa2-1. Chikamu chechipiri chinobvumira mhinduro dzakavhurika - zvichinyanya kubvunza kuti sei mutengi akasarudza chiyero ichocho, maitiro atingaite zvirinani, kana kuti ndiani wavanokurudzira. Ivo vanorova kutumira, uye ndizvozvo! Iko hakuna nzvimbo yekuzadza zita ravo, email kero, kana chero chinhu chakadai. Sei? Nekuti isu TAKANGO vatumira email uye tinofanirwa kunge tatoziva kuti ivo ndivanaani!
Iwe unganyatso kukwira kune mutengi wemwedzi mitanhatu, wawakagadzira hukama hwakakura naye, wobvunza kuti ndivanaani? Aihwa! Kunyangwe izvi zvisiri zvekutarisana-ne-kumeso, hazviite kuti uvabvunze ruzivo iwe uchitova narwo. Semumwe munhu anga ari panotambirwa maemail akadaro, ndinogona kukuudza kuti pandinofanira kupa ruzivo rwangu kwavari PATSVA, zvinoita sekunge ndiri kutengeswa ku… uye mufunge, ndatotenga chigadzirwa chako. . Usandibvunze kuti ndiri ani iwe uchindiziva kare.
Saka, kudzokera ku AskNicely - mutengi anodzvanya paemail, anosarudza nhamba iri pakati pe1-10 obva apa mhinduro dzekuwedzera. Ruzivo irworwo runobva rwatumirwa kusangano rinoitisa ongororo iyi, uko kwavanogona kuwana zvirinani kune izvo zvemutengi zvemunhu iyeye mune ramangwana. Zvibodzwa zvavo zvinobva zvawedzeredzwa kune yavo mutengi chimiro.
Edza Yemahara Muedzo weKubvunzaNicely
Kana iwe uri mushambadzi, kana iwe uine bhizinesi reCommerce, mikana yakanaka chaizvo kuti iwe uzive ndianiformstack ndizvo. Kana iwe usingazive,formstack ipuratifomu iyo inobvumidza mabhizinesi kugadzira avo epamhepo mafomu uye kubata iyo data yakaunganidzwa. Aya ndiwo mazwi evasina kugona, zvirinani. Iyo chikuva chakanyanya kuomarara kupfuura icho (senge AskNicely iri), asi ini ndichaenda pamusoro pezvimwe zvinhu zvinoita kuti chive chinhu chikuru chekuita.
Kupfuuridza nguva,formstack yaedza kuyedza kubatanidza tekinoroji iyo inobvumidza mafomati kuti asanyatso kujeka. Pamwe pamwe neanoonekwa ekugadzirisa maitiro epuratifomu, mabhizinesi anogona zvakare kugadzirisa maitiro mafomu anoratidzwa kune vashandisi. Semuenzaniso: zvinoenderana nekuti mushandisi akazadza sei fomu rapfuura (kana chikamu chakapfuura chefomu),formstack yaizoshandisa "Mamiriro Ekumisikidza" kuratidza mibvunzo inoita kuti pfungwa yemushandisi ipindure. Muchokwadi, mimwe mibvunzo inogona kusvetuka zvachose. "Mamiriro Ekumisikidza" anoshandiswa kubatsira kudzikamisa iyo fomu yekuzadza maitiro uye kuwedzera kupedzisa mitengo. Akanaka kupora, handiti?
Zvino, sekusangana nekubatana nevatengi vemazuva ano kunoenda,formstack ine sarudzo yekushandisa "Pre-Populating Fomu Minda." Sezvandambotaura kare, zvakanakisa kubvunza vanhu iwe une hukama zvavari. Hameno. Uye kunyangwe iwe usinga funge kuti "hazvishamise," vashanyi vewebhusaiti havadi kuzadza ruzivo rwavo rwekutaurirana kakawanda uye kakawanda. Kune vanhu vari kutoita bhizinesi rako, unogona kuzviita kuti ruzivo rwevatengi rwekuonana ruri kunyorwa kubva kune imwe fomu kuenda kune imwe. Hazvina kufanana nekusava nefomu inoratidzwa zvachose, asi zvirokwazvo kutanga kukuru.
Imwe sarudzo ndeyekutumira yakasarudzika fomu URL iyo inoratidza kuti fomu kune mumwe mushandisi kana mutengi. Aya ma URL anowanzo kuwanikwa mu "Ndatenda" maemail uye ivo vanowanzo nongedzera kuKutevera-Ongororo. Panzvimbo yenzvimbo yekuisa zita, email kana nhamba yefoni, inosvetukira mumubvunzo wekutanga. Iko hakuna sumo - kungori kudyidzana kune chinangwa.
Kunyange ndisiri pachezvangu an Xbox mushandisi, ndinoziva vanhu vazhinji vari. Mumwe wenhengo dzechikwata changu, Felicia (PERQ's Zvemukati Nyanzvi), inowanzo mushandisi. Kunze kwesarudzo yakakura mumitambo, Felicia anofarira Xbox One yazvino mushandisi interface - inova inobata zvikuru uye yakasarudzika
Paunenge uchishandisa Xbox (kana kunyangwe PlayStation, yechinhu ichocho), zvakajairika kugadzira chimiro chevatambi - zvese nechinangwa chekusiyanisa vashandisi vakasiyana uye nemitambo yepamhepo. Izvo zvakanaka nezve aya magemhu profiles ndeyekuti iyo Xbox interface inokubata iwe senge munhu. Ukangopinda, unogamuchirwa na "Hi, Felicia!" kana "Hi, Muhammad!" pachiratidziri (uye zvinokuudza "Kwakanaka!" kana iwe waenda). Iri kutaura newe sekunge ichinyatso kukuziva iwe - uye nokutendeseka, inodaro.
Yako Xbox mushandisi nhoroondo ine yakasarudzika dashibhodhi neese maapplication ako, ese ako emitambo mamaki uye rondedzero yeshamwari dzako dzese dzazvino. Chiri kunyanya kutonhorera papuratifomu iyi ndechekuti, pamwe nekukuratidza iwe zvese zvinoita kuti chiitiko chive chakasarudzika uye chinonakidza, software yacho inoedza kuita kuti chiitiko CHIKWANIKE CHAKANAKA.
Chinhu chimwe Felicia akawana chinonakidza ndechekuti aive achigamuchira mutambo uye mazano eapp, ASI zvakanyanya zvichienderana nekushandisa kwake, asi zvichibva pane zvaishandiswa neshamwari dzake parizvino. Nekuti pane pfungwa yenharaunda yakatenderedza mazhinji emavhidhiyo emitambo, uye vashandisi vazhinji vane zvido zvakafanana, zvine musoro kuburitsa nekuratidza vashandisi chimwe chinhu chitsva. Kana Felicia akaona kuti chikamu chakanaka cheshamwari dzake chiri kutamba "Halo Wars 2," semuenzaniso, angangoda kutenga mutambo uyu kuti atambe navo. Iye aigona ipapo kubaya pamufananidzo wemutambo, uye kushandisa kadhi rakachengetwa paprofile yake kutenga mutambo, kurodha pasi uye kutanga kutamba.
Tauya kure, kure kure kubva mazuva ekudzokorora fomu achizadza, asi tichine nzira refu yekufamba. Pachine mabhizinesi mazhinji kunze uko ane tsika "yekutora mari nekumhanya." Vari kuwana iyo ruzivo, stats uye bhizinesi ravanoda kuti vazviriritire - asi ivo havasi kuyedza kuedza kuchengetedza avo vatengi. Kana ini ndakadzidza chero chinhu pamusoro pemakore mashoma apfuura kubva kushanda paPERQ, ndezvekuti vatengi vanonzwa kugadzikana kana mabhizinesi achivandudza hukama navo. Vatengi vanoda kunzwa kugamuchirwa - asi zvakanyanya kukosha, vanoda kunzwisiswa. Patinonzwisisa zvakanyanya vatengi vedu kuenda kumberi, ivo vanowedzera kuda kuita bhizinesi nesu.
Tags: AmazonasknicelyfeliciaformstackPERQmutambo we play stationXbox
Muhammad Yasin ndiye Director weKushambadzira paPERQ (www.perq.com), uye Munyori akaburitswa, nekutenda kwakasimba mukushambadzira kwakawanda-chiteshi uko kunounza mhedzisiro kuburikidza neyechinyakare nedhijitari masvikiro. Basa rake rakazivikanwa nekugona muzvinyorwa zvakaita seINC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb, uye Buzzfeed. Hupenyu hwake mukushanda, Kuzivisa kweBrand, uye Dhijitari Kushambadzira Strategic kunoguma nedhata rinotyairwa nzira yekusika uye kuzadzikiswa kweanotyisa nhepfenyuro yekushambadzira midhiya.
Awardzee: Mawaniro Ekutsvaga Mubairo Pamhepo
Maitiro ekugadzirisa iyo Ruzivo-Base Chinyorwa